Okulandelayo | Mayelana: Philanthropy
Kwa-NextMapping ™ sibheka ikusasa - ikusasa lokugcina limayelana nezingane zethu. Sikholwa ngamehlo abomvu ukuthi ukuhlinzeka izingane ngamakhono 'obuholi' ngeke kuzisize kuphela ukuthi zihambisane nezinselelo manje kepha kuzokwenza nekusasa lomsebenzi libe yindawo engcono futhi ekugcineni ibe ngumhlaba.
Sidale i-Kids Can Lead njengenye yezindlela zethu zokubuyisa - senza izinhlelo zaminyaka yonke zezingane futhi sisebenzela iphrojekthi enentshisekelo yokwakha iwebhusayithi ene-gamified ukusiza izingane zifunde amakhono ayisisekelo obuholi.
Umbono wethu: Dala ikusasa elingcono ngokulungiselela abaholi bethu besikhathi esizayo ... izingane!
Okusijabulisa kakhulu ngumthelela ezinganeni emhlabeni wonke FUTHI sizobe sinikela ngokukhululekile ezinhlanganweni eziningi zosizo ezigxile ezinganeni. ”
I-Reg & Cheryl Cran, Abasunguli
Isebenza kanjani: Ama-4 C's Wezingane Angahola
Sakha ingosi ye-Kids Can lead lapho izingane nabazali bazo noma othisha bezokwazi ukufinyelela khona amakhono obuholi bezingane. Sisebenzisana namaqembu wezingane anombono ofanayo ukusiza izingane ukuba zibe ngabaholi bethu abalungele ikusasa.
Ukuzethemba kususelwa ekuzethembeni okunempilo, sisiza izingane ukwakha ukuzethemba kwazo okuzisiza ukuba zenze izinqumo ezinhle futhi zixazululele inkinga ngokuxazululeka.
Sifundisa ukuthi ukuba nesibindi kufana 'namandla amakhulu' ukuba nekhono lokuzikhulumela, ukuhlala ngokweqiniso kuye nokuthi ukumelele okulungile.
Sisiza izingane ukuba zifunde ukubaluleka kolimi lomzimba, izinhloso namazwi nokuthi zithinta kanjani indlela abazizwa ngayo ngathi nangamagama abawakhethayo athinta abanye.
Sisiza izingane ukuthi zibone ukuthi uhlamvu lokwakha luyisici esibalulekile sokuba ngumholi. Umlingiswa wokwakha ufaka ukwenza okulungile lapho kungekho obukayo nokukhetha ukucabanga ngomqondo we-'me to we '.
Ngabe uphefumulelwe ukuba yingxenye yalomsebenzi omangalisayo?
Xhumana nathi ukuthola ukuthi kanjani!